Lionel Messi Oo Hal Oo Cajiib Ah Sabab Uga Dhigay In Uusan Uga Tegi Karin Barcelona %
Lionel Messi Oo Hal Oo Cajiib Ah Sabab Uga Dhigay In Uusan Uga Tegi Karin Barcelona
Dad badan ayaa su’aal waxay ka qabaan in Lionel Messi uu kaliya wax ku yahay Barcelona, islamarkaana uu ubaahan inuu ku biiro koox kale si uu u cadeeyo inuu yahay ciyaaryahan sare, islamarkaana meel walba ku fiican.
Laakiin, La Pulga ayaa wuxuu ka diiday sheekadaas, siagoona sheegay inuu dareemayo in uusan ubaahneen ka tegista Barcelona si uu u cadeeyo maqaamka uu hadda ka joogo kubada cagta caalamka oo qeyb ahaan isaga ay u waabsan tahay.
Messi ayaa wuxuu dhaliyay xili ciyaareedkan marka kaliya laga hadlo horyaalka La Liga 34 gool, waana ninka ugu sareeya wuxuuna qarka u saaran yahay inuu ku guuleysto Kabta Dahabka ee horyaalka La Liga, inkastoo kulan uu baaqi yahay.
“Waan ogahay in sanad walba aan u dagaalamayo inaan ku guuleysto wax walba, halkee ayaanse u fiican nahay,” ayuu usheegay Messi, Telefishinta SPY Sport ee laga leeyahay wadankiisa Argentina oo uu wareysi xiiso leh siiyay.
“Hada waxaan joogaa kooxda aduunka ugu fician, mid kamid ah Magaalooyinka ugu fiican, waxaan haystaa qoys wanaagsan iyo caruur, saaxiibo, marka uma baahni inaan sameeyo isbedal,” ayuu cod dheer ku sheegay La Pulga.
“Sanad walba waxaan ahay mid utaagan loolan, sidaas darteeda uma baahni inaan bedasho kooxdeyda si aan shaqsiyaad ugu cadeeyo waxa aan aniga ahay.
“Waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku ku fekerayaan oo ah inaan ku biiro horyaalo kale sida England, laakiin isla waqtigaas inaad go’aansato koox sida Barcelona oo kale ah waa wax aad u adag,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Lionel Messi.
Sikastaba, hadalkaan kasoo yeeray Lionel Messi wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhawaanahaan ay Barca ku fashilantay inay ceshato magacyo waa weyn, kuwaasoo kubada cagta maqaam sare ka joogay, sida Ronaldinho, Ibrahimovic, Xavi, Neymar iyo Iniesta, dhowaan baxaya.
“Costa Waa Sida Nin Waalan, Xayawaan Ah Marka Garoonka Lagu Jiro, Dagaalkana Jecel,” – Xidig Caan Ah Ayaa Yiri
Lionel Messi aniga ma jecli in aan noqdo kan taariikhda ogw sababta